Caleema-saarkii Axmed Madoobe oo dib loo digay mudo aan la cayimin | Xaysimo
Home War Caleema-saarkii Axmed Madoobe oo dib loo digay mudo aan la cayimin
Caleema-saarkii Axmed Madoobe oo dib loo digay mudo aan la cayimin
Maamulka Jubbaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dib u dhacday Xafladdii lagu caleema saari lahaa Madaxweynaha dib loo doortay ee Maamulkaas Axmed Madoobe kadib war saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Jubbaland.
War Saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Xafladda dib loo dhigay muddo kooban oo aan la cayimin, waxaana Xafladda lagu waday inay dhacdo 26 Bishaan oo ku beegan Maalinta Berri ah.
Jubbaland ayaa sababta loo baajiyey Xafladda ku sheegtay kadib markii ay Dowladda Federaalka Soomaaliya is hor istaag ku sameysay wufuudii lagu casuumay Xafladda taasoo ay ku tilmaamtay inay tahay mid sharci darro ah.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xariyaad dheeri ah oo dhanka hawada ah waxa ay kusoo rogtay magaalada Kismaayo, iyadoo sheegtay in mudo seddax maalmood ah aysan wax diyaarad ah ka dagi karin magaalaada Kismaayo.
Dowladda Soomaaliya ayaa xayirtay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif oo doonayey inuu u dhoofo Magaalada Kismaayo ee Caasimadda Jubbaland, waxayna arrintaas keentay inay kasoo horjeestaan dhammaan qeybaha kala duwan ee Siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Halkaan hoose ka akhriso war saxaafadeedka kasoo baxay Jubbaland